GM: You're Na-eme Nnyocha Nyocha Njọ | Martech Zone
Fraịdee, June 28, 2013 Wednesday, July 20, 2016 Douglas Karr
Mgbe m nya ụgbọala m afọ iri, ekpebiri m ịga nnukwu ma ọ bụ ịla. N'ịbụ onye ịhụnanya nna nna m nwere maka Cadillac, na icheta ngagharị izu ụka ebe ọ kpọpụrụ anyị… azụrụ m mbụ Cadillac n'isi afọ. Thelọ ahịa m zụtara n'aka ya bụ ihe ịtụnanya… ruo na ndị ụwa site na nnabata, na onye na-ere ahịa, na ndị ọrụ. Oge ọ bụla m na-eme oge ọhụhụ maka mgbanwe mmanụ (apụ m iPhone App… olee ihe dị mma na nke ahụ?!), Enwere m nnukwu ahụmịhe.
Ma ọ na-eme.
Ajuola m, chido, ihe fọrọ nke nta ka ọ rịọ ka m dejupụta nyocha ọ bụla site na General Motors na Afọ zuru ezu akara. O mere ka o doo m anya na enweghị m ike ịbanye otu ọkwa na-enweghị ihe ọ bụla Afọ zuru ezu. O mere ka o doo m anya na enwere mmetụta dị egwu maka ndị ọrụ ma ọ bụrụ na nke ahụ emeghị.
Ọ na - eme ka m chee na GM ewerela ihe bụbu ezigbo ngwá ọrụ iji chọpụta nzaghachi ndị ahịa ha ma nyochaa afọ ojuju ha wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ngwa agha nke ndị na - ere ahịa na ndị ọrụ ha na - atụ ụjọ. Na ndị na-ere ahịa na-agabiga nsogbu nke ibipụta na ịkwado leta mkpuchi a na nkwupụta ọrụ ọ bụla, na iji oge ole na ole kọwaa ya, ọ bụ ihe nwute. Anaghịdị m ekwu banyere ndị na-ere ahịa na blọgụ a ebe ọ bụ na achọghị m ha ka ha nwee nsogbu maka ya.
Companylọ ọrụ ọ bụla nke na-ejide ọgụgụ isi ndị ahịa na-aghọta na e nwere oke oke njehie na nzaghachi ndị ahịa na njehie mmadụ dị nso ma a bịa na ọrụ ndị ahịa. N’aka ozo, n’agbanyeghi otu ndi otu gi si aru oru, ufodu ndi mmadu n’enwe ihe ojo ma obu jerks ha agaghi enye gi akara zuru oke. N'oge ndị ọzọ, ndị ọrụ gị nwere ike imehie ihe… mana ọ bụ otu ha si gbakee na ya bụ ihe dị mkpa, ọbụghị ma ha rụchara ọrụ zuru oke ma ọ bụ na ha arụghị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, tụfuo elu na ala 5% ma debe ndị ọzọ maka ezigbo mmesoro otu ị si eme. Ndị ahịa anaghị ekwenye na ụlọ ọrụ ọ bụla na-enye a zuru okè 5-kpakpando ahụmahụ, ya mere kwusi icho ya.
Ekwenyesiri m ike na mkpali maka nchịkọta data ndị ahịa a bụ maka ezi ihe kpatara ya. Mana ogbugbu a dika okwu a. Ndị ụlọ ọrụ ekwesịghị ịtụ egwu ịmehie oge ụfọdụ, ma ọ bụ ịnọ na njedebe ọjọọ nke iwe nke onye ahịa cranky.
Ihe nzuzu, n'ezie, bụ na mpụga nke a nnyocha e mere, M afọ ojuju kpamkpam mụ na onye na-ere ahịa m.
Tags: cadillacobi ụtọ ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịanyocha ndị ahịagmnnyocha afọ ojuju
Jun 28, 2013 na 1: 32 PM
Site na ihe omuma nke mbu, Nkwuputa Ndi Ahịa, VOC- Olu nke Ahịa wdg, nwere ike ịbụ obi ọjọọ maka onye njikwa ụlọ ahịa na ndị ọrụ ya. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwa ime ike gị niile iji zụọ ndị ọrụ gị ka ị gafee atụmanya ndị ahịa ọ bụla, otu onye ahịa nwere anyụike na-egweri maka ebumnuche ọ bụla, nwere ike ịnwe mmetụta na-agbawa obi na ogo izu gị ma ọ bụ kwa ọnwa. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịfefe metric ọ bụla achọrọ mana ọ bụrụ na bọtịnụ dị ọkụ bụ ọrụ ndị ahịa, ihe niile a nwere ike iwepụ.
Apr 11, 2015 na 11: 00 PM
GM ọ bụghị naanị Na-achọ nke ahụ na Ọrụ, Mana maka ụgbọ ọ bụla Ọhụrụ a na-ere ndị ahịa a nwere ike ịnweta nyocha site na GM. N'ebe ahụ ọzọ ma ọ bụrụ na onye ahịa anaghị ejupụta ya afọ ojuju. A na-ahụta ka ọdịda maka Saleman nwere Detrement maka ego ha na-enweta n'ime Afọ. Amaara m ebe ọ bụ na m na-ere ụgbọ ala GM ma nke ọhụrụ ma nke eji.
Jun 11, 2015 na 8: 54 PM
ndị na-ere ahịa ụgbọ ala na-eji ndị ọrụ ha dị ka ngwa ọrụ iji mee ka echiche ụgha ha dị na ngwaahịa ha dịkwuo elu. eziokwu bụ na ha na-emepụta ụgbọala unyi ugbu a ụbọchị. Anọla m na azụmahịa a kemgbe ihe karịrị afọ 40 wee hụ ka ịdị mma dara gafee ụlọ ahụ. ọ bụ ihe ọchị nye onye ọ bụla na-ezube itinye ya n’ọdịnihu. Ndụmọdụ m kachasị mma, nọpụnụ ọdịnihu adịghị ebe a… ..
Jun 11, 2015 na 9: 43 PM
Daalụ. Na-abịa site na onye njikwa ọrụ nke Toyota (na ndị ọzọ na-ere ahịa dị mkpa na ụlọ m na ọrụ m), ha niile bụ otu. Ọ bụrụ naanị na ndị na - ere ahịa ga - eme ka olu ha nụrụ, ọ bụghị iwe na ndị ọrụ na - ere ahịa mana ikekwe ịghọta ebe ihe a niile sitere, dịka ị mere. Ezi ihe ngosi nke afọ ojuju kwesịrị ịbụ njide naanị! Ndị ahịa ahụ ọ na-abịaghachi mgbe ha nwesịrị ụdị ọ bụla nke ahụmịhe gị. Nke ahụ kwesịrị ime ka a mata onye na-agba mgba na onye na-enye ọrụ “pụrụ iche”. - Nke ahụ bụ akara kacha elu nke Toyota na nyocha ha. Cheri.
Jun 11, 2015 na 10: 22 PM
Kpamkpam Cheri… enweghị ike ikwenye karịa. Echere m na ọ bịara n’ajụjụ atọ dị iche:
Yourgbọ ala ọzọ gị ga-abụ [akara]?
Ga-azụta ụgbọ ala gị ọzọ n'aka anyị?
You ga-enye anyị ụgbọ ala gị ọrụ?
Onye ọ bụla n'ime ndị a na-egosipụta ntụpọ nke ndị na-ere ahịa ahịa ahụ… akara, ahịa na ọrụ ya. Azịza nke mba ọ bụla n'ime ha nwere ike iduga ụfọdụ ozi dị ịtụnanya iji nyere aka melite ahịa ahụ.
Daalụ maka ntinye gị!